Umenzi weeNkonkxa zeeNkonkxa zePET ICopak
Iitoti zePET soda, inokuba ngamagama njengeetoti ze-PET, iitoti ze-PET eziphezulu kunye nokunye. Ngaba i-PET iyindibaniselwano eyodwa ye-PET Jar ene-Easy yokuvula isiciko sesinyithi. Zenziwe ngezinto ze-PET kwaye zilungele iiphakheji zeziselo ezinjengeziselo, iziqhamo, i-smoothies, ubisi, iti, ikofu enomkhenkce, ubisi kunye nokunye. Ezinye zeempawu zeCOPAK'sIitoti zePET soda njengasezantsi,
Iitoti zePET soda, inokuba ngamagama njengeetoti ze-PET, iitoti ze-PET eziphezulu kunye nokunye. Ngaba i-PET iyindibaniselwano eyahlukileyo yePET Jar ngokulula ukuvula isiciko sesinyithi.Zenziwe ngezinto ze-PET kwaye zilungele iiphakeji zeziselo ezinjengeziselo, iziqhamo, i-smoothies, i-milk, i-teal, ikofu enomkhenkce, ubisi kunye nokunye. Ezinye izinto zeCOPAK’s Iitoti zePET soda njengasezantsi
-Izinto eziphathekayo: Umgangatho ophezulu weplastiki we-PET, unokuba yi-100% iphinde iphinde isetyenziswe.
Ukhuseleko lwebanga lokutya: Ukusuka kwimithombo yolwazi kwimveliso kunye nokuhanjiswa. Yonke inkqubo igqityiwe kumgangatho wokutya.
Ukuhlala ixesha elide nokuqhekeka: Iitoti zePET zesoda zikulungele ukuthatha ukutya kwakho. Ziyilelwe ukubanjwa ngesandla kwaye zitywinwe. Awudingi ukuba nexhala malunga nokuvuza okanye ukuqhekeka.
Ikephu: Sebenzisa izinto zeAluminiyam, zip-top can. Ivula ngokulula kwaye icocekile.
-Uluvo oluhle lokujonga, abathengi banokubona umxholo ngokuthe ngqo, bebonisa inqanaba kunye nexabiso leemveliso zakho
Isithintelo esilungileyo esivela kwi-Oxygen, Ukufuma kweCarbon dioxide.
Inkampani yaseShanghai COPAK ngumenzi wobuchule kwiiphakheji zePET zeentlobo ezahlukeneyo. Iikomityi ze-PET, iibhotile ze-PET kunye neenkonkxa zePET soda zezona mveliso zethu ziphambili.Iitoti zePET soda ziyahluka ngokweemilo, imiqulu, ubungakanani kunye noshicilelo. Ungaxela iinkcukacha zakho ezifunekayo, iiphakheji zakho zePET ozifunayo ziya kuba sezandleni zakho.
Amanqanaba aqala kwi-6oz ukuya kwi-24oz. 12OZIitoti zePET soda kunye ne-16 OZ PET iinkonkxa zesoda zezona zidume kakhulu.
Elungiselelweyo: 4C sticker yoshicilelo okanye iplastiki shrink esonga urhangqo okanye UV-screen yoshicilelo kwibhotile ziyaxhaswa logo yoshicilelo.
Isiciko kunye neebhotile zitywina ngokutywina umatshini. Isiciko kulula ukusivula ngokutsala iringi ephezulu.
Semi-oluzenzekelayo okanye 100% yesoda oluzenzekelayo nga koomatshini lokutywina kubonelelwa. Sinobudlelwane obuhle kunye nokutywinwa komatshini wefektri kwaye unokufumana amaxabiso okhuphiswano kuwe.Ungathumela umatshini wokutywina kunyeIitoti zePET soda ngokudibeneyo kwisitya esinye.
Egqithileyo IPOP pop-top inako
Okulandelayo: Iplastikhi yesoda inako
Eco Iibhotile zeplastiki ezinobuhlobo